ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): အာဆီယံထိပ်ဆီးဆွေးနွေးပွဲအား ဆန္ဒပြခဲ့သော မှတ်တမ်းဖိုင်
မလင်းလက်ကြယ်စင် - ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရတာ စိတ်ဓါတ်လည်း တက်ကြွတယ်။ တဘက်ကလည်း စိတ်မကောင်းဘူး။ ဘာလို့ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွလဲ၊ ဘာလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရလဲဆိုတာ မလင်းလက်ကြယ်စင်တို့ ခန့်မှန်းမိမှာပါ။ ဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခု ကျွန်တော်ရေးထားသေးတယ်တယ်။ အချိန်အားရင်တော့ လာဖတ်ပါဦးဗျာ။ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ စေတနာကို လေးစားလျက်ပါ။
တာဝန်ရှိသူ ရဲနဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ လူကို ၂၀၀၅ သင်္ကြန်ပွဲတုန်းက မြင်ဖူးသလိုပဲနော်။ အမှတ်မှားတာလားတော့ မသိ။ ဒါပေမယ့် သေချာပေါက် အမှတ်မမှားတာကတော့ `ဘိုင့် ဘိုင်´ လို့ ပြောသွားတဲ့ ကောင်မလေးကိုပဲ။ :)
It is better to say "Bye Bye" than "See you". Perhaps I hope the police won't call us this time. Ha ha!